AKHRISO:Luqmaan Maxamed Nuur Ardaygii Sanadka 2018/2019 -
HomeArimaha bulshadaAKHRISO:Luqmaan Maxamed Nuur Ardaygii Sanadka 2018/2019
July 29, 2019 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
(Md. Luqmaan Maxamed Nuur Arday
Waxaa Munaasabad Qaran Loo Iyo Dhiiragelin Loo Sameeyay ardaygii Soomaaliyeed ee kaalinta koowaad u galay imtixaanka qaranka ee shahaadada dugsiga sare 2018/2019.
Luqmaan maxamed Nuur Waxa uu ku dhashay Degmada Ceelbaraf Oo Ka Tirsan G/Sh/dhexe Waxbarashadiisa Waxa uu ku soo bartay Qur’aanka 114 Xifdintiisa Markii uu Ka Baxay Dugsi Quraanka Waxa uu Bilaabay In uu Barto Cilmiga Noocyadiisa Kala Duwan Dugsi Hose Iyo Dhexe Waxa uu ku soo qaatay Degmada Ceelbaraf Kadibna Waxa uu u Soo Wareegay Magaalada Muqdisho Waxana uu Waxbarashadiisa ka Sii Bilaabay Iskuulka Al-Fajri .
Munaasabad qaran oo heer sare loo soo agaasimay ayna kana soo qaybgaleen indheer garadka bulshada bahda waxbarashaduna ugu badnayd ayaa lagu qabtay Hotelka Beach View ee magaalada Muqdisho, munaasabadda ayaa lagu xusayey dedaalka ardaygii ka soo banbaxay ku dhawaad soddonkii kun ee arday ee u fariisatay intixaanka qaranka ee shahaadada dugsiga sare.
Jawiga oo ahaa mid qiiro lahaa waxaa ka hadlay dad badan oo soo jeediyey hadallo isugu jiray ammaan, duco iyo dardaaran loona muujinayey ardayga Luqmaan Maxames Nuur, waalidkiis, dugsiga Al faraj ee uu wax ka bartay iyo Mu’asasad dugsiga Maamusha.
Khudbaddii aan ka jeediyey goobta quruxda badan ee ay dadkeenna qiimaha badan isugu yimaadeen ayaan ka sheegay in ardayga noocaan oo kale ah dalka iyo dadka qiimo gaar ah.ugu fadhiyo isagoo ka mid ah dadka naadirka ah ee lagu tilmaamo cabqariyiinta una baahan yahay xannaano gaar ah iyo in loo diyaariyo mustaqbal wanaagsan iyadoo la maalgelinayo ardayga si uu dalka iyo dadka ugu faa’iideeyo.
Guusha dhaxalgalka ah ee uu arday Luqmaan xaqiijiyey waxaa sal u ah isaga oo ahaa arday hore ugu qorshaysnayd guusha uu gaaray maareeyeyna waqtigiisa kuna mashquulin waxyaabaha ay ardaydeenna inta badan ku mashquulaan.
Is barbartaagga hoggaamiyahaan tacliineed waxa ay u hiillinaysaa aqoonta iyo ehelkeeda waana guul ay ku faani karaan bud -dhigayaasha tacliinta dalka burburka ka dib. Waxa ay astaan u tahay dedaalka ay bahda waxbarashadu ku bixiyeen dhallaanka Soomaaliyeed xilli dalka duruuf adag ay ka jirto.
Ugu dambayn waxa aan ugu baaqayaa ardayda Soomaaliyeed heerarkooda kala duwan ee waxbarashada inay ka lib keenaan aqoonta ay baranayaan si ay ugu adeegaan dalka iyo dadkaba. Waxaan farxadda guusha la wadaagayaa ardaygeenna qiimaha badan tusaalahana u ah ardayda Soomaaliyeed Luqmaan Maxamed Nuur, waalidka sharafta badan ee guushaan dhabbaha u xaaray, bahda Mu’asasada Al Faraj iyo guud ahaan inta ka qayb qaadatay garab istaagga iyo dhiirrigelinta guuleyste Luqmaan Maxamed Nuur.